Archive du 20190130
Fitondrana IEM Mila maka lesona amin’ny TIM.K25
Miditra amina kihon-dalana lehibe ny fanaovana politika eto amintsika, raha tarafina amin’ny zavatra niseho taorian’ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo.
Andry Rajoelina Mijabaka sahady…
Tsy ratsy ny finiavan-dRajoelina hanarina ny Rovan’i Manjakamiadana izay nambarany ny alahady 27 janoary teo saingy ao anatin’ny laharam-pahamehana ve izany ?
Filankevitry ny fampihavanana malagasy “Malagasy mifamelona no tanjona !”
Mbola manohy ny asany hatrany ny eo anivon’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na CFM, raha ny fanazavan’ny filoha lefiny, Gerard Ramamimampionona.
Vina IEM Io fa ronono an-tavy, hoy ny Teza
Taona arivo fahatelo isika izao. Taonjato faha 21 saingy mbola maloto ihany ny fitsipi-dalao eto amintsika, hoy ny filohan’ny antoko politika Teza, Jean Louis Rakotoamboa.
Antoko politika Tsy mahafehy ny sata mifehy azy…
Ny politika dia loharano iray maha firenena ny firenena ary miainga amin’ny antoko politika no hahafahana mametraka vina fampandrosoana amin’ny firenena. Mifanohitra amin’izany anefa no misy eto Madagasikara.
Mpandraharaha mpomba an-dRajoelina iray Nosakanana minisitra ny fanolorany omby…
Samy zanak’i Mahanoro ary samy mpanohana an-dRajoelina no tsy mitovy hevitra satria misy ny endrika fankahalana, raha ny vaovao azo.
Antananarivo Renivohitra Sao dia tsy tokony hasiana ben’ny tanàna ?
Manana ny maha izy azy Antananarivo Renivohitra amin’ny maha Renivohitr’i Madagasikara azy.
Serge Zafimahova “Tokony hitarina ny fe-potoam-piasan`ny depiote”
Mihazakazaka ny toedraharaham-pirenena vao lany ny filoham-pirenena sady vao tafapetraka ihany koa ny governemanta tao anatin`ny herinandro maromaro.
Faneva Raholdina “Hendry ny filoha Ravalomanana”
Maha-te hidera ny fihetsika rehetra nataon’ny filoha Marc Ravalomanana taorian’iny valim-pifidianana nahazahoana filoham-pirenena vaovao iny hoy ny mpandalina politika Faneva Raholdina.
Louis Zafisambatra Miantso ny filoha hampihatra ny politika ahitan’ny vahoaka ny rariny
Malagasy mila ravinahitra any Paris Frantsa i Zafisambatra Louis sady mpandinika ny raharaham-pirenena.
Baolina kitra seksiona Ambohidratrimo Tompondaka 2018 ny ASCT Mahitsy
Voahosotra ho tompondakan’ny seksion’ny baolina kitran’Ambohidratrimo taona 2018 ny ekipan’ny ASC Tridan avy eny Mahitsy. Resiny tamin’isa 2-0 tamin’ny alahady teo, tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina, ny ekipan’ny Fc Talent Academy avy eny Ivato.
Taom-pilalaovana vaovao ny taranja Tolona Malagasy Hatomboka amin’ny alahady 10 febroary 2019
Mahavelom-panantenana ny hoavin’ny fanatanjahantena Malagasy amin’ny fisian’ny vina matotra voafehin’ny velirano navoatran’ny IEM voalazan’ny ministra Tinoka Roberto tamin’ny famindram-pahefana natao teto Mahamasina,
Tsipy kanetibe « Doublette Mixte » Fantatra ireo ekipa 8 voalohany hiatrika ny Grande Finale
Satria ny fahafantarana an’ireo ekipa « Doublette Mixte » 8 voalohany hiatrika ny « Grande Finale » amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2019 eo amin’ny taranja tsipy kanetibe amin’ity sokajy ity no tena zava-dehibe
Asa lahy na fifandrifian-javatra ihany izao karazana loza mahazo ny Malagasy izao na antony hafa mihitsy. Vaovao ny taona ary vaovao ihany koa ny mpitondra ny firenena amin’izao fotoana izao.
ZANA-BOAY TENY ANOSY
Nampisahotaka ny olona naka rivotra vao maraina tao amin’ny zaridainan’Anosy ny fisian’ny zana-boay nandehandeha teo amin’ny bozaka.
Ankorondrano Andranomahery 40 isa ireo tokantrano traboina misy olona 80 mahery
Raha saika voaresaka hatrany ireo traboina vokatry ny fihotsahan’ny tany teto an-drenivohitra tato ho ato dia zary adino kosa ireo traboina vokatry ny fiakaran’ny rano eny amin’ny faritra iva.
Tsenan’ny “Bidon” Rehefa misy rano tapaka ihany vao tena mandeha
Tsy mandeha isan’andro ny tsenan’ny “bidon” fangalana rano raha ny fanadihadiana natao tetsy Ambalavao Isotry omaly.
Fanorenana trano an-drenivohitra Tsy ampy fanabeazana ny mponina
Ny fanotofana tany sy ny fananganana trano samy tsy misy fahazoan-dalana no anisan’ny olana goavana momba ny lafintany an-drenivohitra.
Orinasa JIRAMA Miezaka manafoana ny delestazy, tsy misy ahiana ny rano vatsiany
Hiezaka hanome jiro sy rano araka ny tokony ho izy ho an’ireo mpanjifany ny orinasa JIRAMA.
Ady amin’ny kolikoly Tena mila ezaka be Madagasikara
Nivoaka omaly talata 29 tanoary tetsy amin’ny Gara Soarano ny tatitry ny Transparency International-Initiative Madagascar (TIIM) momba ny tondron’ny kolikoly IPC (Indice de Perception de la Corruption) sy ny laharan’i Madagasikara ho an’ny taona 2018.